လူမှုမီဒီယာလူ ဦး ရေအချိုးအစား Martech Zone
လူမှုမီဒီယာလူ ဦး ရေဆိုင်ရာ
စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 26, 2015 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
လူမှုမီဒီယာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၏နေရာဒေသအလိုက်နေရာအနှံ့ပျံ့နှံ့နေသည့်အချိန်တွင်လူမှုမီဒီယာ၏လူ ဦး ရေစာရင်းကိုကြည့်ခြင်း၏တကယ့်တန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ အမှန်မှာသင်သည်၎င်းတို့အားလုံးတွင်အလားအလာရှိသောသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ စင်မြင့်ပေါ်အခြေခံပြီးလူ ဦး ရေစာရင်းဇယားတွေထဲမှာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိနေတာကိုကြည့်ရတာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာတွင်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုစီတိုင်းတွင်ရှိနေခြင်းကို ဖန်တီး၍ တစ်ခုချင်းစီအတွက်အပိုင်းလိုက်ခွဲခြားနိုင်သည်။ သင်၏အရင်းအမြစ်များပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကွန်ရက်များကိုပညာရှိစွာရွေးချယ်ပါ။ မိုက်ကယ်ပက်တာစင်, SproutSocial
မှ ပိုကောင်းတဲ့အပိုင်းမဟာဗျူဟာအကြောင်းကြားရန်လူမှုမီဒီယာလူ ဦး ရေအချိုးအစား:
အရွယ်ရောက်သူ ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် Facebook ကိုအသုံးပြုကြသည်။ Facebook ရဲ့လူ ဦး ရေစာရင်းကို Audience Insights မှာတွေ့နိုင်တယ်။
အရွယ်ရောက်သူ ၂၃% သည် LinkedIn ကိုအသုံးပြုကြသည်။ LinkedIn လူ ဦး ရေစာရင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် LinkedIn စာနယ်ဇင်းစာမျက်နှာ.
အရွယ်ရောက်သူ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် Pinterest ကိုအသုံးပြုကြသည်။ Pinterest လူ ဦး ရေစာရင်းကိုကြည့်နိုင်သည် Pew Research Centre ၏အဓိကလူမှုကွန်ယက်ပုံစံများ၏လူ ဦး ရေစာရင်း.
အရွယ်ရောက်သူ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် Instagram ကိုအသုံးပြုကြသည်။ Instagram ကိုလူ ဦး ရေစာရင်းကိုတွေ့နိုင်သည် Pew Research Centre ၏အဓိကလူမှုကွန်ယက်ပုံစံများ၏လူ ဦး ရေစာရင်း.
အရွယ်ရောက်သူ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် Twitter ကိုအသုံးပြုကြသည်။ တွစ်တာအသုံးပြုမှုနှင့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုထိုတွင်တွေ့နိုင်သည် တွစ်တာကုမ္ပဏီစာမျက်နှာ.
ငါတို့လည်းနောက်ဆုံးပေါ်အပါအဝင် လူမှုမီဒီယာတော်လှန်ရေး မှဗီဒီယို Erik Qualman, Socialnomics ၏စာရေးဆရာ။
Tags: Erik QualmannFacebook ကိုလူ ဦး ရေအချိုးအစားဂူဂဲလ်ပေါင်းလူ ဦး ရေစာရင်းlinkedin လူ ဦး ရေစာရင်းအွန်လိုင်း MBApinterest လူ ဦး ရေအချိုးအစားပလက်ဖောင်းreddit လူ ဦး ရေSnapchat လူ ဦး ရေလူမှုမီဒီယာလူမှုရေးမီဒီယာလူ ဦး ရေအချိုးအစားလူမှုမီဒီယာလူ ဦး ရေအချိုးအစားဆိုရှယ်မီဒီယာတော်လှန်ရေးtwitter လူ ဦး ရေ
Social Media တွင် B2B အတွက်တန်ချိန်များစွာရှိသည်